United States na-anọgide na Nkwekọrịta Paris maka ugbu a | Network Meteorology
United States na-anọgide na Paris Agreement maka ugbu a
Kemgbe nsonaazụ ntuli aka onye isi ala nke United States, onye onye mmeri ya bụ Donald Trump, e nweela ọtụtụ nchegbu na esemokwu banyere ma US ga-ahapụ ma ọ bụ nọrọ na nkwekọrịta Paris.
Iji belata mmetụta nke mgbanwe ihu igwe ma melite nkwụsi ike nke ụwa, Ọ dị mkpa na mba ndị na-emepụta ikuku ikuku kacha dị na mbara igwe, dị ka US na China, kwadoro nkwekọrịta Paris. Kedu ihe mechara mee United States?
1 Donald Trump na isi nke USA
2 Nzukọ ozi na ihe omume Trump
3 Echiche America na Tillerson nwere olile anya
Donald Trump na isi nke USA
A họpụtara Donald Trump ịbụ onye isi ala United States na ọ bụ nwoke pụrụ iche. Tụlee mgbanwe ihu igwe ahụ Ọ bụ ihe ndị China mepụtara iji wee nwee asọmpi. Ọ dabeere iji mee ụdị nkwupụta ahụ na ahụmịhe na ahụmịhe nke ha. Ọ na-ekwu na na Canada ọ bụ snow na-ada oyi ma na-ajụ oyi na ya onwe ya anaghị ahụ nsonaazụ mgbanwe ihu igwe.
N'iburu okwu ndị a n'ihu, ọ kwupụtara n'oge ọ na-akwado ya na, ọ bụrụ na ọ bụ onye isi ala nke United States, ọ ga-ewepụ ego niile a kara aka maka omume megide ọgụ megide mgbanwe ihu igwe. Nke a ka ọ na-eme kemgbe maka enweghi mgbanwe di otua ọ ga-ekenyekwa ego ahụ iji nweta ma melite arụmọrụ nke mmanụ ọkụ.
Nzukọ ozi na ihe omume Trump
Nzukọ Nkwupụta Mbụ nke President Donald Trump emeela ememe na Jenụwarị 11. Ọgbakọ ahụ ekwupụtaghị ezigbo ihe ọ bụla gbasara amụma ọ ga - egosipụta metụtara okwu metụtara gburugburu ebe White House ga - ebido rue Jenụwarị 20. Bọchị ahụ bụ mgbe Donald Trump jiri ọkwa dịka onyeisiala.
Ihe na-agba ume maka amụma ihu igwe bụ na Rex Tillerson, onye bubu onye isi oche nke ExxonMobil na onye ode akwụkwọ nke State nke United States n'ọdịnihu, enweela ọganihu na ugbu a, United States agaghị ahapụ Nkwekọrịta Paris na mgbanwe ihu igwe. Ọ weere na mkpebi dị mkpa na United States ga-aga n'ihu isonye na mba ụwa na nkwekọrịta niile na mkpebi niile emere maka mgbanwe ihu igwe, ebe ọ bụ na United States bụ ike ụwa nke ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ọkara nke ikuku ikuku na-ekpo ọkụ n'ikuku.
“Echere m na ọ dị mkpa na United States itinye aka na ya. Acktụkwa egwu nke mgbanwe ihu igwe ọ chọrọ nzaghachi zuru ụwa ọnụ. Onweghi obodo ga-akwụsịli nsogbu ahụ naanị ya, ”Tillerson kwuru.
Ọ gbakwụnyere na eziokwu ahụ bụ na United States nọgidere na nkwekọrịta Paris, nke gọọmentị Barack Obama kwadoro na mbụ, dị ezigbo mma maka nlekọta ụwa nke ọma.
Echiche America na Tillerson nwere olile anya
ExxonMobil bụ nke Tillerson duziri mgbe nkwekọrịta Paris ahụ malitere na Nọvemba gara aga ma n'oge ahụ ọ tụọlarị na nkwupụta na nkwekọrịta Paris bụ ihe dị oke mkpa nke gọọmentị gburugburu ụwa iji nwee ike ịzaghachi na mbụ mmetụta nke mgbanwe ihu igwe kpatara na ọkwa ụwa.
N'ịtụle agọnarị nke onye isi ala a họpụtara na ụfọdụ ndị otu ndị otu gọọmentị ya, ịtụ anya ọrụ ọma maka ihu igwe na ọnọdụ okike bụ ezigbo nkwupụta. Agbanyeghị, nkwupụta Tillerson Ọ na-ahapụ anyị iji ụfọdụ ọlaọcha na-ekpuchi ihe atụ a.
Ọ bụ ihe na-agba ume na Tillerson ghọtara na mgbanwe ihu igwe chọrọ ka ndị gọọmentị na-eme ihe zuru ụwa ọnụ n'akụkụ nke ọtụtụ gọọmentị na-ahụ maka ikuku gas na-ekpo ọkụ na ikuku. Na mgbakwunye, ọ na - enye anyị olile anya na ọ nwere ike ịdụ ndụmọdụ nye Donald Trump banyere mkpa ọ dị ịga n'ihu na Nkwekọrịta Paris, ebe ọ bụ na United States ga - bụrụ onye ndu megide mgbanwe ihu igwe ma sọpụrụ nkwa gị na mba ụwa, ebe ọ bụ na ọ bụ maka ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ọkara nke ihe ọkụkụ zuru ụwa ọnụ. Ọ bụghị naanị na Donald Trump ga-edebe United States na nkwekọrịta Paris, mana ọ ga-eme nke ahụ dị ka onye isi nke diplomacy America.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Meteorology » Mgbanwe ihu igwe » United States na-anọgide na Paris Agreement maka ugbu a
Maapụ na-egosi mmetọ emetọ anyị na-ekuru
Ọnọdụ okpomọkụ ga-agbadata na Spain bido echi